कमब्याक जितले पनि रियल ला लिगा उपाधि विमुख - Kheladi News Kheladi News
Real Madrid's Karim Benzema celebrates after scoring the opening goal past Barcelona's goalkeeper Marc-Andre ter Stegen, background, during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and FC Barcelona at the Alfredo di Stefano stadium in Madrid, Spain, Saturday, April 10, 2021. Benzema scored once in Real Madrid's 2-1 victory. (AP Photo/Manu Fernandez)
एजेन्सी-भिल्ला रियललाई पराजित गरेपनि रियल मड्रिडले ३५ औं स्पेनिस ला लिगा जित्नबाट बन्चित भएको छ । एट्लेटिको मड्रिडले रियल भालाडोलिडलाई पराजित गरेपछि उपाधि पक्का बनाउँदा रियलको जितले प्रभावकारी हुन सकेन् ।
एक गोलले पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै संघर्षपूर्ण जित निकालेको रियल अन्तत ८४ अंकसहित दोस्रो स्थानमा रहँदै सिजन २०२०-२०२१ टुग्याएको छ । जितेर पनि उपाधि उचाल्न नपाउँदा निकै निराश बन्न पुगेको थियो ।
एरेमी पिनोले २० औं मिनेटमा गोल गर्दै भिल्लारियललाई अग्रता दिलाए । तर अन्तिम पाँच मिनेटमा रियलले नाटकीय रुपमा दुई गोल गर्दै उपाधिको लागि संघर्ष गर्यो । अन्तिम पाँच मिनेटमा गरेको संघर्ष अन्तत उपाधि उचाल्न विफल हुन पुग्यो ।
८७ औं मिनेटमा करिम बेन्जेमाले गोल गर्दै खेलमा फर्किएको रियलले इन्जुरी समयमा लुका मोड्रिचको गोलसँगै २-१ गोलको नजिता आत्मसात गर्यो । स्पष्ट जितले ३ अंक जोडेपछि एट्लेटिको भन्दा २ अंकले पछि पर्दै उपाधि थप्दै कीर्तिमानी बनाउने योजना असफल रह्यो ।